ब्रेन ट्युमर र मेरी आमा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
ब्रेन ट्युमर र मेरी आमा
२०७० चैत्र १८, मंगलवार ००:५३ गते
“जीवन केवल फूलैफूलको वसन्त मात्र होइन, तुषारे शिशिर पनि हो” भन्ने चर्चित पंतिm यहाँ मैले स्मरण गर्न चाहेँ । हुन पनि साँच्चै नै हरेक व्यतिmको जीवनमा आरोह–अवरोह आउने विषयलाई कसैले नकार्न सक्दैन, त्यो हुने कुरा भई छाड्दछ । भनिन्छ, मानवजीवन एक अमूल्य जीवन हो । ८४ लाख जुनी पार गरेपछि मात्र मानवजीवनको जुनी प्राप्त हुन्छ । यस्तो अमूल्य जीवनलाई सुखसयलपूर्ण वातावरणमा जीवन बिताउन कसलाई पो रहर हुँदैन र ! रहरै भएर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि हामी स्वस्थ हुन जरूरी छ । स्वस्थ हुने चाहना हुँदाहुँदै पनि यो अमूल्य जीवनसँग सम्झौता गर्न हामी अल्पविकसित राष्ट्रका जनता बाध्य छौँ । यही विषयलाई आजको विकसित राष्ट्रको पोस्ट मोर्डन समाजसँग तुलना गर्दा ठीक उल्टो होला ।
हामी अल्पविकसित देशका जनताहरुसँग उच्च प्रविधि र स्रोतको उपलब्धता भए ती सजिलै हल हुन्थे होलान् । रह्यो कुरा हामी अल्पविकसित देशका जनता हाम्रो न्यूनस्तरको जीवनयापनका कारणले उत्पन्न हुने खतरनाक रोगसँगको संघर्ष बहुतै चुनौतीपूर्ण विषयको कुरा हो । जसका कारणबाट नेपालजस्तो देशमा वार्षिक १२,००० भन्दा बढी जनताहरु क्यान्सरजन्य रोगका कारणबाट ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । त्यस्तै १२,००० मध्ये एक हुनुहुन्छ– मेरी आमा शिवकुमारी सापकोटा अर्थात् मेरो जन्मदाता । मेरो आमाको यस घटनाले सारा न्यून वर्गीय जनताको प्रतिनिधित्व नगर्ला भन्न सकिँदैन । आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा आफ्नो सन्तानको प्रगति देख्न कसलाई पो रहर हुँदैन र ! यस्तै प्रसंगमा २०६९ को चैत महिनामा सामान्य टाउको दुख्ने लक्षण देखिए पनि त्यसलाई उहाँले कसैलाई व्यतm गर्नुभएन, सामान्य दुखाइ कम गर्ने औषधि खानुभयो, तर खासै सञ्चो भएन । त्यसपछि लगत्तै आफ्नो दुई जीउकी बुहारीलाई भेट्न भरतपुर जाने निर्णय गरी जेठी बुहारी शकुन्तलालाई घर जिम्मा लगाई बघौडा–१ माडीबाट भरतपुर प्रस्थान गर्नुभयो, जहाँ कान्छो छोरा र कान्छी बुहारीको अस्थायी बसोबास रहेको थियो । त्यसै बेला कान्छी बुहारी सुत्केरी हुने समय नजिकिँदै थियो र बुहारीको सुत्केरी स्याहार गर्ने इच्छा पनि थियो । अफसोच, त्यो इच्छामा तुषारपात भयो । उहाँलाई बिस्तारै–बिस्तारै टाउको दुख्ने अवस्था बढ्दै जाँदा दिनमा १८ घन्टाभन्दा बढी निद्रा लाग्ने लक्षण सुरू हुँदै गर्दाको अवस्थामा तत्काल डा. शशिजङ पाण्डेसँग चेकको लागि लगियो । चेक गरिसकेपछि उहाँले टाउकोमा समस्या छ भनी सिटी स्क्यान गराउने अनुरोध गर्नुभयो । त्यसपछि कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, भरतपुरमा सिटी स्क्यान गराइयो । तत्काल डाक्टरले मलाई एकान्तमा बोलाएर ब्रेन ट्युमर भएको जानकारी दिए । म छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ अनि पुनः जाँचको लागि कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका बरिष्ठ न्युरोलोजिस्ट पी. बी. रानालाई पनि देखाइयो । उहाँले करिब ३० मिनेटको चेकजाँच र रोगसम्बन्धी परामर्श दिनुभयो, सँगसँगै अपरेसन गरेर पनि सफल नहुन सक्ने सल्लाह दिनुभयो । भरतपुर क्यान्सर अस्पताल लैजान सल्लाह दिनुभयो ।
त्यतिबेलासम्म रोगले आमाको स्मरणशतिm क्षीण बनाइसकेको अवस्था हो । उहाँको देव्रे खुट्टा टेकेर हिँड्न अप्ठ्यारो भइसकेको र बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो । तत्काल घरपरिवारको सल्लाहमा क्यान्सर अस्पतालमा चेक गराइयो । केही दिनलाई औषधि पनि दियो, तर खासै सुधार भएन । पुनः लगियो डाक्टरले भर्ना गराए, त्यसपछि केही दिन सुधार देखियो । करिब २० दिन अस्पतालमा राखेपछि ब्रेन ट्युमरको अपरेसन डा. बी. के. थापाले गर्ने निश्चित भयो, तर बायोस्पी टेस्टका लागि मात्र अपरेसन गरिएको कुरा अपरेसनपछि थाहा भयो । अपरेसनपछि बायोस्पी टेस्टमा पठाइयो, त्यो रिपोर्टमा केही देखिएन । कस्तो विडम्बना, यहाँनेर नेपालका डाक्टरको डाक्टरी पेसामाथि पनि शंका लाग्यो । बिरामीको उपचार गरी सही र तथ्य डायगनोसिस गर्ने डाक्टरको दायित्व भएता पनि आजभोलि डाक्टरहरुको कार्यप्रति धेरै जनमानसको असन्तुष्टि बढिरहेको छ । सुत्केरी बुहारीलाई स्याहार गर्ने र नयाँ वर्षको सौगातस्वरुप जन्म लिएकी प्यारी नातिनीको मुख हेर्न कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर विवशता अस्पतालको शैयामा विवश हुन पुग्नुभयो ।
अपरेसनको करिब १० दिनपछि डाक्टरले अब सञ्चो हुन्छ भनेर डिस्चार्ज गरे र बुबाको सल्लाहमा हाम्रो स्थायी घर माडी लगियो । घर लगेको ३ दिनपछि आमालाई अकस्मात छातीको समस्या देखियो । स्वासप्रश्वासमा प्रत्यक्ष असर पर्दै गयो । तुरून्तै हाम्रो सामाजिक, धार्मिक मान्यताअनुसार वैतरणी गरेलगत्तै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट अक्सिजन दिँदै पुनः क्यान्सर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरियो । अफसोच, २०७० वैशाख २३ मा उहाँ यस धर्तीबाट परमधाम हुनुभयो ।
एक महिनासम्म आमाको सेवामा लिप्त मेरो दाजु विष्णु अनि मेरा बुबाआमालाई विभिन्न आश्वासन दिँदै चाँडै सञ्चो हुने अनि घरमा जाने कुरा गर्नुहुन्थ्यो । अनि, कान्छी बुहारीको छोरी हुर्काउन इच्छा प्रकट गर्नुहुन्थ्यो । अफसोच, त्यो इच्छा पूरा हुन सकेन । आमाको सेवामा संलग्न छोरीहरु, छोराहरु, बुहारीहरु, नातिनातिना, भाउजूहरु र सबै शुभचिन्तकहरु शोकाकुल भए । हजुरआमाको स्वास्थ्य अवस्था देखेर अस्पतालमै बलिन्द्र धारा आँशु बगाउने ममता छोरी, प्यारी हजुरआमा गुमाउन बाध्य भइन् ।
हाम्रो निम्न वर्गीय परिवार नहुँदो हो त देशविदेश लगेर केही समय भए पनि पर धकेल्न सक्थ्यौँ होला, त्यसमा हाम्रो आफ्नै विवशता थियो । त्यसरी हेर्दाहेर्दै मैले एक होनहार नेपाली आमा गुमाएँ । यस्ता आमाहरु यहाँ धेरै गुमिसकेका छन् र अझै गुम्नेवाला छन् । यस्ता क्यान्सरजन्य रोगको रोकथाम तथा उपचार गर्न राज्यले निःशुल्क व्यवस्था नल्याएसम्म बर्सेनि हजारौँ आमाबुबाहरु मृत्युको सिकार हुनेछन् । चिकित्सा विज्ञानले क्यान्सर लाग्नुको कारण यही नै हो भनेर अहिलेसम्म भन्न सकेको छैन । क्यान्सरको खतरा बढाउने कारण मात्र पहिचान गरेको छ, जसमा धूमपान, मध्यपान, अस्वस्थ खानपान, प्रदूषित वातावरण र शारीरिक व्यायामको अभाव आदि पर्दछन् । केही रसायनको सम्पर्कले पनि जोखिम बढाउँदछ भनिन्छ । तर रक्सी, चुरोट नखाने र कुनै पनि किसिमको रासायनिक सम्पर्कमा नआएका व्यतिmसमेत क्यान्सर भएको पाइएको छ । हालै २०१४ मा क्यान्सर रोगमा गरेको एक अनुसन्धानअनुसार विकासोन्मुख देशमा सन् २०१२ मा ८.२ मिलियन मृत्यु क्यान्सरजन्य रोगबाट भएको पाइएको छ । उतm अनुसन्धानबाट विकासोन्मुख देशमा सन् २०२५ सम्ममा ८० प्रतिशत रोग क्यान्सरजन्य रोग लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
नेपालमा राष्ट्रियस्तरमा क्यान्सरजन्य रोगसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वे हालसम्म गरिएको पाइएको छैन । भतmपुर अस्पतालका मेडिकल अर्कोलोजिस्ट सुदीप श्रेष्ठ नेपालमा हालसम्म क्यान्सर रोगको नीति, योजना र भिजन नबनेको स्वीर्कानु हुन्छ । उहाँका अनुसार हाल नेपालमा वार्षिक १५,००० भन्दा बढी क्यान्सरका रोगीहरु आएको बताउनुहुन्छ । युएनको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी विकासोन्मुख देशमा क्यान्सर रोग बढी देखिनुको कारण भाइरस संक्रमण, धूमपान, मादक पदार्थ र निष्क्रिय जीवनयापन हो भनेर भनिएको छ । यद्यपि, नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव कविराज खनाल यस्ता रोगको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने कार्य जरूरी भएको बताउनुहुन्छ । नसर्ने रोगबाट भन्दा सर्ने रोगबाट हाल धेरै जनसंख्या प्रभावित भएकाले सरूवा रोगको रेकर्ड र अनुसन्धानमा राज्य लागेको छ । अन्य रोगहरुको रेकर्ड गर्ने कार्य प्याकेजमा राखिएको छ भनेर भन्नुहुन्छ ।
जनताको यो अवस्था भनेको राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा माथि गरेको ठूलो खेलबाड हो । यस्तो राज्यको गैरजिम्मेवारिताविरूद्ध जनता एकजुट भई बन्दै गरेको संविधानमा समेत यस्ता रोग लागेमा राज्यद्वारा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यदि यस्ता समस्याहरुलाई बेलैमा समाधान गर्नतर्फ लागिएन भने यस्ता समस्याहरुले भयावह समस्या ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन ।